Flim2MM: Enemy of the State (1998)
တိုင်းပြည်ရန်စွယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှိလည်းရှိနေတုန်း ပါပဲ။ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အရာမှန်သမျှက ရန်စွယ်တွေပါပဲ။ ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်နဲ့ချီပြီး ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို အနည်းအများ ကြုံဖူးကြတာချည်းပါပဲ။ ဒီလိုရန်စွယ်မျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နေတဲ့ သူတွေ ရှိသလို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ Enemy of the State ဇာတ်ကားဟာ အဲလို ပြဿနာကို ကာကွယ်သူနဲ့ ဖန်တီးသူကြား ဥာဏ်ကစားတဲ့ပွဲပါပဲ။
အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Will Smith ရဲ့ဂျစ်ကန်ကန် သရော်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဇာတ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် Blockbuster Entertainment Awards (1999) အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ဆောင်ဆုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းသဘောအရ အက်ရှင်မင်းသား ဇာတ်ရုပ်ကို တဖြည်းဖြည်းပုံဖော်သွားပုံတွေ ငေါ့တော့တော့ အပြောတွေကြောင့် ဇာတ်လမ်းက ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းက လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦး သေဆုံးတာကနေ စ ပါတယ်။ အဲဒီအမှုကို လိုက်နေတဲ့ရှေ့နေဟာလည်း အောင်မြင်တဲ့ ဂျစ်ကန်ကန် ရှေ့နေတစ်ဦးဟာ မထင်မှတ်ပဲ သက်သေခံပစ္စည်းတစ်ခုကို ရခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်လောက်တဲ့ အရေးကြီး သက်သေမျိုးပါ။ ဒါကို ဘယ်လိုဆက်ကိုင်တွယ်မလဲ။ ကူညီပေးမယ့်သူ ရှိပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့....
[FORMAT]:………………………….:) BluRay / 720p
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Crime, Mystery
[RELEASE RUNTIME]:………….:)2hr 12 mins
Posted by Y Junction at 11:08:00 PM
Labels: Action, Crime, Hollywood, Mystery